Thursday . 20 February . 2020
အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုဘက်က ရပ်တည်ကြောင်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့ ၁၀၀ ကျော်ထုတ်ပြန်
နိုင်ငံတကာတရားရုံးဟာ နိုင်ငံရေးအာဏာ၊ စစ်ရေးအာဏာယန္တရားနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို အသုံးချကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှုအတွက် တာဝန်ယူ ဆောက်ရွက်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း မြန်မာအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ၁၀၀ ကျော်က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မြန်မာဟာ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက် ချိုးဖောက်မှုနဲ့စွပ်စွဲပြီး ကြားဖြတ်အစီအမံတွေ မှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတဲ့အပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (အိုင်စီဂျေ)က ဒီကနေ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ရှိ နေချိန်မှာ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက သဘောထားထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်၊ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ လူမျိုးရေးဖြစ်တည်မှု ကွဲပြားမှုတွေကို နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စစ်ရေးအရတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေမူဝါဒတွေကို အသုံးပြု၍ ဖြစ်စေ အနိုင်အထက် အကြမ်ဖက်ကျူးလွန်မှုတွေ လက်ရှိကာလအထိ ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒီလိုအကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှုတွေကို နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးအာဏာ ယန္တရားနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို အသုံးချခွင့်ရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့ တရားစီရင်ရေးဟာ အဆိုပါ ကျူးလွန်သူတွေကို အပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ မဆောင်ရွက်နိုင်တာကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆက်လက်ကျူးလွန်ခွင့်ရနေကြတယ်လို့လည်း ထောက်ပြထားပါတယ်။
ကျူးလွန်သူတွေကို ပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်က အရေးမယူနိုင်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေအရအရေးယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် နိုင်ဖို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေး အခွင့်အရေးနဲ့ တရားမျှတမှု ရရှိရေးအတွက် များစွာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်အဖြစ်လက်ခံကြိုဆိုကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ပါ တယ်။
နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို တရားစွဲတာဟာ နိုင်ငံရေးအာဏာနဲ့ စစ်ရေးအာဏာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်ရှိသူတွေကိုသာ ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပြည်သူတွေကို ရည်ညွန်းခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာနားလည်တယ်လို့လည်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ အညီ အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုဘက်မှ ရပ်တည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကြေညာထားပါတယ်။
ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်တဲ့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ ၊ ကျောင်းသား လူငယ်နဲ့ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့ အဖွဲ့စည်းတွေ အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၀၃ ဖွဲ့ပါဝင်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာတွေ အသက်ဆုံး ရှုံးရပြန်ပြီ
ဘောင်းဘီအတို ဝတ်မိတဲ့ အပျိုမလေးသုံးယောက် ခေါင်းဖြတ်သတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခံခဲ့ရ
ပိတ်မိနေတဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာ အပြာကားတွေအခမဲ့ ကြည်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီ
သင်္ဘောပေါ်ပိတ်မိနေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဒုက္ခသည်တွေကို iPhone(၂၀၀၀)လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဂျပန်အစိုးရ